Gudoomiyaha Baarlamaanka PL oo loo doortay Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil
November 14, 2019 - Written by Editor
Garoowe:-Waxaa maanta xarunta Golaha wakiilada ee Puntland ka dhacday Doorashadii guddoomiyaha barlamaanka Puntland waxaan ku loolanay ilaa 3 musharax oo kala ah xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil , xildhibaan Cabdijamaal Cismaan iyo Cali Axmed Saalax (Dhahar).
Musharaxinta u tartamayey xilka Doorashadii guddoomiyaha barlamaanka Puntland ayaa mid waliba waxaa uu soo jeediyey waxqabadkiisa iyo wax uuq aban doono hadii xilka gudoomiyaha Baarlamaanka uu ku guulaysto Wareegii qaad ayaa waxaa codadka loo kala hellay sidda hoos ku xusan:-
1. Xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil 34 Cod.
2. Cabdijamaal Cismaan Maxamed 17 Cod.
3. Cali Axmed Saalax (Dhahar) 12 Cod.
Wareegga 2aad ee doorashada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa waxaa iskugu soo haray 2 musharax oo kala ah Xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo helay 46 cod iyo Xildhibaan Cabdijamaal Cismaan Maxamed oo helay 17 cod.
Xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yusuf Jibriil ayaa waxaa ku guulaystay xilka gudoomiyaha baaramaanka Puntland waxaan uu hellay cod dhan 46 cod.